Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fiaramanidina sy fahavelomana amin'izao tontolo izao: mahita fifandanjana maharitra
Filohan'ny ivon-toeram-piaramanidina momba ny fiaramanidina sy ny fahaveloman'ny tontolo
Ny tontolo iainana sy ny seranam-piaramanidina dia mila mandeha amin'ny fonon-tànana, koa ny fitadiavana fifandanjana eo amin'ny fahaveloman'ny tontolo sy ny fahaveloman'ny indostrian'ny fiaramanidina sy ny dia no laharam-pahamehana indrindra.
Ny fandrahonana tena misy dia ny momba ny dia sy fizahan-tany, izay mitaky asa iray amin'ny 10 manerana an'izao tontolo izao - na natao tamin'ny taona 2019.
Mandritra izany fotoana izany, ny gazy karbonika avy amin'ny asan'ny olombelona dia mitombo mihoatra ny 250 heny haingana kokoa noho ny tamin'ny loharano voajanahary taorian'ny vanim-potoanan'ny ranomandry farany.
Ny tsara dia ny fivoahan'ny fiaramanidina dia eo ambanin'ny haavon'ny 2019.
Tsy mora ny mahita ny fifandanjana eo amin'ny fiaramanidina sy ny fahaveloman'ny tontolo. Ny iray dia fandrahonana misy, ary ny iray kosa fandrahonana ny fisiantsika, ary mila mahita izany fandanjana izany isika. Fepetra fohy dia fohy ny iray, ny iray kosa dia fotoana fohy sy maharitra.
Izany no Ivon-toerana ho an'ny sidina Ny filoha Emeritus, Peter Harbison, dia nilaza vao haingana tamin'ny hetsika CAPA mivantana niresaka tamin'ny tontolo iainana, satria, araka ny nambarany, ny faharetana dia zavatra iray lehibe, na dia ny fanarenana ny ny indostrian'ny fiaramanidina. Vakio, na henoy izay nolazain'ny Filoham-pirenena momba ity lohahevitra lehibe ity.
Ny fandrahonana tena misy dia ny momba ny dia sy fizahan-tany, izay mitaky asa iray na 10 ao amin'ny 2019, asa iray amin'ny 10 manerana an'izao tontolo izao, ary iray amin'ny dimy isaky ny asa vaovao, hoy ny WTTC. Ary amin'ny tranga maro, manomboka any Gresy ka hatrany amin'ny Nosy Pasifika, raha ny anarany no iantsoanao azy dia miankina bebe kokoa amin'ny dia lavitra. Ary ny ampahany lehibe amin'ny dia tsy azo ihodivirana dia amin'ny rivotra, noho izany ny rafitry ny fiaramanidina dia mifamatotra amin'ny fitsangatsanganana.
Etsy ankilany, ny fandrahonana misy, ity teny nalaina avy amin'ny NASA ity, "Carbon dioxide avy amin'ny asan'ny olombelona dia mitombo mihoatra ny 250 heny haingana kokoa noho ny tamin'ny loharano voajanahary taorian'ny vanim-potoanan'ny ranomandry farany," izay mandanjalanja tsara. Ary manaitra io grafika io, tsipika mitsangana amin'ny haavon'ny karbôna dioksida mitombo.
Rehefa nanao ny fomba fijerinay ny taona 2020 izahay tamin'ny faran'ny taona 2018, tao amin'ny mpitari-dia ny zotram-piaramanidina, dia nijery ireo olana lehibe hitranga eo amin'ny indostria izahay. Miala tsiny, izany dia tamin'ny taona 2019, nijery ireo olana lehibe tamin'ny taona 2020. Ary ny tampon'ny lisitra dia tsy azo ihodivirana ny faharetana. Betsaka ny tabataba tamin'izany fotoana izany ampahibemaso, ary nisy ny tena fanekena tamin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina fa ho olana lehibe io. Tsy zavatra azontsika natao fotsiny ny nifandray tamin'ny besinimaro fa hanjary teritery amin'ny fitomboana. Ary ny zava-dehibe tokony hotadidina rehefa miditra amin'ny vanim-potoanan'ny fitomboana isika dia ny hoe tsy ho afaka izany. Mbola ampahany lehibe amin'ny fampitoviana fiaramanidina iray manontolo io.